Kubuda kwezuva Kunogona Kukonzera Mhezi | Natural Bvudzi Regrowth & Bvudzi Kurasikirwa Kurasikirwa
Zuva rakanakira bvudzi asi rakawandisa rakashata. Tsvaga Balance! Isu tese tinoziva kuti mwenje wezuva unogona kukonzera kwakawanda hutano hwekubatsira sekupa muviri vhitamini D yakakosha uye zvidzidzo zvakawanda zvakaratidza kwatiri kuti zuva rinobatsira kupa miviri yedu nezvikafu zvinodikanwa kuti rirambe richitenderera bvudzi kukura. Furt
Zuva rakanakira bvudzi asi rakawandisa rakashata. Tsvaga Balance!
Isu tese tinoziva kuti mwenje wezuva unogona kukonzera kwakawanda hutano hwekubatsira sekupa muviri vhitamini D yakakosha uye zvidzidzo zvakawanda zvakaratidza kwatiri kuti zuva rinobatsira kupa miviri yedu nezvikafu zvinodikanwa kuti rirambe richitenderera bvudzi kukura. Uyezve, zvimwe zvidzidzo zvinotaurawo kuti kurasikirwa nevhudzi kunogona kukonzerwawo nekusakwana kwevhitamin D. Saka ita chokwadi chekuti uri kuwana zuva rakakwana!
Asi Zvakawanda Zvakadii Zvakawanda?
Nezve 15 kusvika 30 maminetsi zuva rega rega zvakangokwana kuita kuti bvudzi rako rive nehutano uye kukurudzira kukura kwebvudzi. Chero ipi nguva, kuratidzwa kwezuva nezuva kune scalp yako kunogona kukuvadza kunyanya panguva idzo zuva rine simba (11am kusvika 4pm). Yakanakisa nguva yekubata rimwe zuva mushure me4pm.
Ndezvipi zvikonzero nei zuva richikwanisa kukuvadza bvudzi?
Iyo bvudzi bvudzi riri pachivara chako chikamu chebvudzi rako chinobuda kunze kweganda rako kubva pabvudzi rebvudzi. Kujeka kwemasikati kunogona kukanganisa maprotein ako ebvudzi, kunogona kuderedza vitamini E neC kubva paganda rako uye neyakanyanya mafuta akakosha anowanikwa. Mhedzisiro yacho ndeiyi: kuwedzera bvudzi risina kusimba uye bvudzi rakawandisa rinotaridzika. Zuva rinogona zvakare kubvisa kusviba kubva kubvudzi rako, richisiya raoma, frizzier uye zvimwe risinganakidze pamusoro.
Kana bvudzi rako riri kazhinji kutetepa, uri kuwedzera zvakanyanya mikana yekupiswa kubva kuzuva. Kuverengera zuva zvakanyanya kunogona kukanganisa kukura kwebvudzi. Chero kuwanda kana kukuvadza kune ganda rako kunogona kukonzera kutetepa kwebvudzi rako zvakanyanya.
Matipi ekuchengeta bvudzi riine hutano panguva yekugeza kwezuva
Regedza Munyu kana mvura yakakoshwa, kwete iyo chete inogona kuita discolor uye kuoma bvudzi rako asi inogona kupisa scalp yako mushure
Chengetedza vhudzi rako rakanyoroveswa uye rakapetwa zvakanaka. Izvi zvinoreva kuti, kamwe kamwe mune imwe nguva shandisa imwe mvura kwariri. Kwete izvozvo chete, iwe unofanirwa kuzvinyorova zvakare uye kunwa mvura yakawanda.
Pfeka ngowani kana kuisa jira pamusoro wako kuti udzivirire kubva kuzuva.
Usashandise Sunscreen pane bvudzi rako. Kunyangwe pasina humbowo hunoratidza kuti sunscreen inogona kukuvadza bvudzi rako, kune zvakawanda zvigadzirwa kunze uko zvekuchengetedza zuva uye vazhinji vacho vanoshandisa zvakasiyana siyana zvisungo zvisina kujairika uye inguva chete inotaurira kana ine njodzi paganda kana kwete.
Hakuna kukwana zuva?
Kana usiri kuwana zuva rakakwana, unogona kunge uine vitamini D kushomeka. Tsvagurudzo dzakawanda dzakaratidza kuti kusavapo kwevhitamini D mumiviri yedu kunogona kukurumidzisa kuyera. Rimwe basa vhitamini D rinotamba kubatsira mukugadzira bvudzi nyowani nekukudza mavara ebvudzi. Panguva iyo kana isina kukwana Vitamin D mune yako system, bvudzi idzva rinogona kumiswa.
Zvikonzero zvekushayikwa kwevhitamini D muhurongwa hwako zvinosanganisira kushandisa nguva yakawanda mukati, kupfeka zuva rakawandisa, uye / kana kusadya chikafu chakarongedzwa nezvakakosha zvinovaka muviri.
Ungawana sei vitamini D raunoda
Nzira yakanaka yekuwana iyo Vitamin D isina zuva ndeyevhitamini D ma supplements, multivitamini uye echokwadi chikafu chakapfuma muvhitamini D. Kune mamwe chikafu chakanakira bvudzi uye zvakasikwa zvakapfuma nezvinovaka muviri. Salmoni, mafuta ehove uye mafuta emhuka zvinhu zvikuru zvinowanikwa. Asi iwe unogona zvakare kudya chikafu chikafu chakasimbiswa nevhitamini D, senge zvimwe zviyo nemamir.
mhanzakukuvara kwebvudzibvudzi rinoperakuonda kwebvudzikukuvara kwezuva kune bvudzivitamini d kushomeka